Taliyihii ciidanka DFS iyo Abaanduulihii Ciidamada Qalabka Sida oo xilka laga qaaday
Muqdisho:-Wararka naga soo gaaraya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in xil ka qaadis lagu sameeyey taliyihii ciidanka milatariga Jen Cabdi Qaadir Sheekh Cali Diini iyo Abaanduulihii ciidanka DFS Jen Cabdi Kariin Yuusufa Aadan Dhega Badan.
Munaasabad balaaran oo maanta duhurkii ka dhacaday Xarunta Wasaaradda Gaashaandhiga ee DFS oo ayna kaqayb galeen qaar ka mid ah golaha wasiirada ee DFS ayaa waxaa xilka wareejiyey taliyihii ciidanka xoogga iyo Abaanduulihii ciidanka DFS waxaana ay xilka ku wareejiyeen Taliyaha Cusub Ciidanka Milatariga DFS Jeneraal Daahir Aadan Cilmi ( Indha Qarshe ) waxaana xilka Abaanduulaha Ciidanka qalabka sida lagu wareejiyey Jeneraal C/Risaaq Khaliif Xuseen.
Wasiirka Gaashaandhigga iyo Wasiiru dowlaha Wasaaradda arrimaha Gudaha ayaa munaasabada ka hadlay waxayna amaan u soo jeediyeen saraakiisha xilka wareejisay kuwaas oo ciidanka ka soo gudbiyey wakhti aad u adag sida uu sheegay wasiirka G/dhiga ee DFS .
Taliyihii hore ee ciidamada milatariga Gen.C/qaadir Sheekh Cali Diini Ayaa u mahadceliyay saraakiisha xoogga dalka ee howsha adag la soo qabtay waxaana uu hambalyo u diray taliyaha cusub ee ciidanka Milatariga ee DFS isaga oo ka codsaday saraakiisha iyo ciidanka in ay la wada shaqeeyaan.
Dhanka kale Abaanduulihii hore ee ciidamada DFS Gen.C/kariim Yuusuf Aadan Dhagabadan ayaa isna ugu Hambalyeeyay abaanduulaha cusub ee ciidanka DFS wuxuuna ugu baaqay ciidanka in ay la shaqeeyaan isaga oo sheegay in uu rajeynayo in ay ciidanka uu gaarsiiyo abaanduulaha cusub meel ka fiican halka uu haatan marayo.